Flatbed Diecutting Vagadziri & Vatengesi - China Flatbed Diecutting Factory
GUOWANG T-1060Q DIE-CUTTER NEMAOKO
Regedhi bhokisi rinogona kusarudza kusarudza Japan Sankyo. Inogona kuita kuti muchina ugadzikane uye kuvimbike kana oparesheni ikasangana nekumira kwechimbichimbi. Kutorera kumhanyisa kunotora otomatiki pneumatic kusimudza basa, inokurumidza kukiya sisitimu uye yepakati mutsetse kurongedza yekumisikidza system. Inogona kuita kuvhiya kuve nyore uye kuve nyore. Operation screen inotora 19 inches HD LED Kubata skrini, inoita masisitimu akaomesesa akareruka uye akajeka, inovandudza zvakanyanya kugona kwemidziyo. Yekubatsira kuendesa tafura ine otomatiki kuendesa basa.
GW kaviri chiteshi kufa-kutema uye foil stamping muchina
Guowang otomatiki Double Chiteshi Kufa-kutema uye Kupisa Yekudhira-tsikwa Muchina unogona kuona akasiyana akasiyana musanganiswa nemutengi kudiwa.
Chekutanga unit inogona kusvika 550T kumanikidza. kuitira kuti iwe ugone kuve nenzvimbo hombe yekudhinda + yakadzika embossing + inopisa inopisa-stamping + kupfekenura mukumhanya kumwe.
Yemhando yepamusoro feeder ine mana masucker ekusimudza bepa uye mana maswiti ekutumira mapepa unoona yakatsiga uye inokurumidza kudyisa bepa. Iyo kukwirira uye kona yemasuck inogadziriswa nyore nyore kuti achengetedze machira akanyatsotwasuka.
Makara akakwana anogona kuumbwa pane mapallet anomhanya pane njanji dze pre-mutoro system. Izvi zvinopa mupiro wakakosha mukugadzirwa kwakatsetseka uye rega opareta afambise murwi wakagadzirirwa kunodyisa nenzira kwayo uye zviri nyore.
GUOWANG C106 ZVINOKOSHA ZVINOFA-CUTTER PASINA KUKOSHESA
Kugadzirirwa kwemurwi munzira inoyerera inodzorwa nemota kune chaiyo sheet yekudyisa.
Pre-mutoro system, isingamiri kudyisa, yakakwira murwi (Max. Murwi kukwirira kunosvika 1600mm).
GUOWANG R130 ZVINOKOSHA ZVINOFA-CUTTER PASINA KUKOSHESA
Kumira kwakarurama kweKucheka kumhanyisa kunodzorwa neakarurama ma sensors ane otomatiki cheki-yekukiya mudziyo.
Kucheka kudzingirira mutero mudziyo.